Rikoooo.com - Rikoooo na-achọ onye nhazi afọ ofufo
Nchịkọta ụlọ Banyere Rikoooo Terminal mara ọkwa
Rikoooo na-achọ onye nhazi onye ọrụ afọ ofufo
Official Ọkwà si Rikoooo na otu egwuregwu
Mbido akwụkwọ a na-agụghị • 8 posts • Peeji 1 of 1
Nchịkwa zuru ụwa ọnụ
Jikọtara: 09 Sept 2011, 10:03
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » 04 Jenụwarị 2017, 21:14
Ana m achọ onye ga-eto ma na-elezi ọhụụ ọhụrụ Bekee a. Ị ga-abụ onye nchịkwa na onye mmezi n'otu oge ahụ, ị ​​ga-ewu ụlọ a site na ala; agbakwunye agbụrụ, ederede na ihe ndị ọzọ, ị ga - enwerịrị ohere maka oge a.
- Ị na-asụ Bekee dika nwaafo ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta
- Ị na-arụ ọrụ mgbe ị nwere oge maka ya dịka onye ọrụ afọ ofufo
- Ị hụrụ Flight Simulators n'anya n'ezie
- Ị nọ n'elu 18 afọ
- Ị dị njọ
M ga-enyere gị aka maka ihe ọ bụla ịzụ ma ọ bụ arịrịọ ọganihu, ma ọtụtụ oge ọrụ gị, ị nwere ike ịme onwe gị nke ndị nhazi ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Bon vols - Obi ụtọ na njem
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 06 Jenụwarị 2017, 10:20
Enwere m ike iji ọnọdụ a.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » 06 Jenụwarị 2017, 15:07
Ekele m, ezitere m gị email. Biko zaa Email.
Jikọtara: 30 Eprel 2015, 01:35
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by superskullmaster » 17 Jenụwarị 2017, 16:09
You ka na-ele anya? Maka na ọ bụrụ na ị nọ, m niile nọ. Mbido ndị agha, tupu onye njikwa ọgbakọ n'ihu, m na-arụ ọrụ n'ụgbọelu na abụ m onye na-enye ikikere ikikere na nnabata. Na-simming kemgbe 2003.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » 17 Jenụwarị 2017, 18:35
Maka mụ onwe m agaghị efe efe FSX dị ụkọ
Anọ m na Rikooo maka ụmụ ya na ejighị n'aka ogologo oge ma ugbu a ma bụrụ nnọọ ịhụnanya na saịtị, na ọdịnaya
Enwere m ike inye onwe m
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » 18 Jenụwarị 2017, 00:06
Ndewo ụmụ okorobịa,
Enwere m ekele nke ukwuu maka ịbụ onye ọrụ afọ ofufo, ị nabatara nke ọma ebe a, akpọtụrụ m Dariussssss (onye nchịkwa ọhụụ ọhụrụ) banyere ntinye akwụkwọ gị, ọ dị anyị mkpa ugbu a ịzụlite ndị ọrụ nhazi ọhụrụ. Anyị ga-alaghachi azụ gị ozugbo.
Obi ụtọ na ụgbọ elu
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 19 Jenụwarị 2017, 12:21
Nice izute gị niile ma nabata gị na Rikoooo Forum. Daalụ maka mmasị ị na-ewere ọnọdụ ndị a. M ga-akpọtụrụ onye nke ọ bụla site na ozi-e. Mgbe nke ahụ gasịrị, m ga-akpọsa ndị ọhụrụ nke ndị ọrụ ha.
Ọzọkwa, nabatara Rikoooo.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 19 Jenụwarị 2017, 15:29
Ọ ga-amasị m ịjụ gị ka ị dee ihe ncheta ụgbọelu ị maara nke ọma. Nke a ga - enyere anyị aka ikpebi onye kachasị mma ka a ga - akwụ ụgwọ dịka onye mmezi onwe ya. Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo ahụmahụ ụgbọelu ụwa, ma ọ bụ na ị na-efe efe na ndị ọzọ ụgbọ elu sims, nweere onwe gị ka anyị mara.
Dịka m kwuru, ọ ga-enyere anyị aka.
8 posts • Peeji 1 of 1
Laghachi na “Nkwupụta”